China 7in 1 USB3.0 Type-C3.0 to HDMI Type-C SD / TF Docking station for Surface Pro 7 mpanamboatra sy mpamatsy |Wellink
7in 1 USB3.0 Type-C3.0 mankany HDMI Type-C SD/TF Docking station for Surface Pro 7
Famolavolana ho an'ny Surface Pro 7 Fanamarihana 1: Ity dock pro surface ity dia tsy hifanaraka tsara amin'ny faritra misy anao raha mampiasa fonon-tanana fiarovana ianao.Mifanaraka amin'ny Microsoft Surface 7.* Fanamarihana2: Tsy mifanaraka amin'ny Surface Go/ Surface Pro 3，4, 5, 6.
Fifandraisana Ethernet haingana
1000Mbps Ethernet seranan-tsambo ho an'ny avo-hafainganam-pandeha amin'ny Internet surfing hafainganana, ampiasaina ho an'ny universal azo ampiharina amin'ny faritra samihafa.
4K HDMI Adapter:Asehoy an-kalalahana amin'ny HDTV, monitor na projector amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo HDMI ny horonan-tsary 4K UHD@ 30Hz na feno HD 1080P an'ny solosainao, fanohanana 2K / 1080p / 720p / 480p / 360p mihemotra.
Mirror Display Mode& Manitatra ny fomba fampisehoana.
Manitatra ny efijerinao amin'ny seranan-tsambo HDMI ary mandefa mivantana ny horonan-tsary 4K @60Hz mankany amin'ny HDTV, mpanara-maso, na projectors. 4K @60Hz HDMI MacBook Pro Donlge Adapter dia mitondra anao ny fampifanarahana horonan-tsary misy vokany mazava.Tonga lafatra amin'ny fandefasana sarimihetsika HD feno amin'ny HDTV-nao;Manitatra lalao video 3D amin'ny fanaraha-maso anao na asehoy ny PPT anao amin'ny alàlan'ny projectors ho an'ny fivoriana birao sy fialamboly, izay manome anao traikefa hita maso mazava toy ny hoe eo amin'ny sehatra ianao.
SD Card Slots (USB 3.0 Speed)
• SD Slot: manohana SD, SDXC, SDHC, RS- MMC.
2 x USB 3.0 seranana
• Ny tahan'ny famindrana angona ambony indrindra 5 Gbps.Mamindra sarimihetsika ao anatin'ny segondra.
• Fanomezana fahafahana miditra amin'ny USB 3.0 tariby fitendry, totozy, USB flash drive, smart phone, tablette, sns mifanaraka amin'ny USB 2.0/1.0 fitaovana.
Noforonina tamin'ny alim-borona tsara tarehy, mpiara-miasa tena ilaina amin'ny solosaina finday karazany rehetra.
Raha ampitahaina amin'ny adaptatera plastika, mampiasa akora firaka aluminium, Gllitra USB-C Hub dia mamorona adaptatera USB C kanto sy azo antoka kokoa, mateza kokoa, mahomby ary tsara tarehy.Ny akorandriaka aluminium koa dia manome fanalefahana hafanana haingana kokoa mba hiarovana ny fitaovanao.
Fiarovana azo antoka & Fanaraha-maso ny maripana
Ny fiasa tsirairay dia misy chip manokana, miasa malefaka kokoa.Natao hisorohana ny hafanana be loatra, ka mahatonga azy io ho azo antoka sy azo antoka rehefa misy seranana marobe.
Fanontaniana:Afaka mampiasa seranana maromaro miaraka ve ianao?Sa indray mandeha ihany?
Valiny:Tsy ampiasaiko indray mandeha ny seranana rehetra satria tsy dia manana fangatahana betsaka aho.Mampiasa port hatramin'ny dimy aho indray mandeha.Ny USB C HUB dia miasa tsara.Somary mafana ihany fa normal.
Fanontaniana:Hanomboka hisy fiantraikany amin'ny fahamarinan'ny seranan-tsambon'ny Mac na ny fiorenan'ny seranan-tsambon'i Mac ve ny fametahana/fanesorana ity adaptatera isan'andro ity?Mety hisy fahasimbana ve?
Valiny:Mitovy ny ahiahiko aminao.
Manana an'ity USB C Hub ity aho ary efa nampiasa azy imbetsaka.Hatreto dia tsy mbola niteraka olana izany.Tsy milaza anefa fa tsy ho avy izany.
Fanontaniana:Mafana ve ity fitaovana ity?Manana iray hafa mitovy amin'izany aho fa rehefa afaka 5 minitra dia lasa mafana be izy ary izay rehetra mifandray aminy dia mafana ihany koa.
Valiny:Kely, Saingy heveriko fa toe-javatra mahazatra ny hoe mafana ny adapter HUB mandritra ny fandidiana (fa tsy mafana).Satria ny HUB adaptatera dia mila hery miasa.
Fanontaniana:Eo amin'ny latabatra mivaingana na fisaka, manao ahoana ny fifandraisan'ireo mpampitohy amin'ireo seranana?Te-hahazo mitsingevana ny fitaovana aho nefa tsy manainga.
Valiny:Eny, azoko atao mora foana ny mampiditra azy amin'ny tanana iray ary manosika azy hiditra fotsiny. Tsy hisy fianjerana, noho izany dia mila manandratra ny solosaina ianao ary mampiditra azy.
Fanontaniana:Ity macbook pro usb c hub ity ve dia mamaly fotsiny amin'ny port Thunderbolt sa azonao ampiasaina ny USB-c hafa?
Valiny:Miaraka amin'ny seranan-tsambo Thunderbolt fotsiny izy io, ny usb-c hafa dia natao ho an'ny data ihany.
Fanontaniana:Mifanaraka amin'ny cable anker usb to lightning ve ny ports USB 3.0 amin'ity hub ity mba hamerenana ny iphone?
Valiny:Miala tsiny, fa ny seranana USB 3.0 amin'ity hub ity dia manohana ny famindrana angona fotsiny.Tsy manohana fiampangana na fampitam-baovao izy ireo.
Fanontaniana:Mila ampidirinao ve ny adaptatera herinaratra vao hampiasa ny dock?
Valiny:Tsia, azonao atao koa ny mampiasa ny hub USB C raha tsy mampifandray ny adaptatera herinaratra aminy.Azonao atao ny manome hery ivelany ho an'ny hub amin'ny alàlan'ny seranana USB C rehefa mampifandray ireo fitaovana noana herinaratra amin'izany ianao.
Fanontaniana:Afaka mandefa mpanara-maso roa amin'ity adpator ity ve izy io ho an'ny efijery miitatra (tsy mitovy)?
Valiny:Eny, nanandrana nampifandray mpanara-maso roa aho tamin'ny fotoana iray, ity adaptatera HUB ity dia afaka mampiasa mpanara-maso roa.Azonao atao ny mampifandray ny fampisehoana iray amin'ny seranana HDMI, ary ny iray hafa amin'ny seranana Thunderbolt 3 karazana C.
Ny monitor roa dia afaka mampiseho sary hafa.
teo aloha: 7in 1 USB3.0 Type-C3.0 mankany HDMI USB3.0 Type-C SD/TF Docking station ho an'ny Surface Pro 7
Manaraka: 65w gallium nitride adapter 12 in 1 Type-C dock (2 in 1)